“Qaxootiga shaqada diida lacagta ayaan ka jarayna” | Somaliska
“Qaxootiga shaqada diida lacagta ayaan ka jarayna”
Xisbiga Kristdemokraterna ayaa doonaya in ay shuruudaha ku sii atkeeyaan magangalyadoonka Sweden sharci ka codsada. KD ayaa doonaya in dadka shaqo loo diro inta ay jawaabta sharciga sugayaan, hadii ay diidaan ayaa laga jarayaa lacagaha ay ka helaan Laanta socdaalka.
Waxaa waajib ku noqon doonta magan-galyo doonka in ay shaqeeyaan 16 sacaadodd isbuucii. Sidaas ayuu sheegaya hindisaha sharci uu xisbagani soo jeediyay.
“Tusaalahan waxaa loo diri kara shaqooyinka fudud, gudaha xerada qaxootiga ama meel ka baxsan meeshan. Waxaa dhici karta in loo diro in ay u shaqeeyaan ururada samafalka, ama in nadiifin iyo cunto karis ay sameeyaan” ayey sheegtay hogaamiyaha xisbigan, Ebba Busch Thor.
Busch Thor ayaa u jeeda in hindisahan sharci saameeyn wanaagsan ku yeelan doono qaxootiga jawaabta sharciga sugaya. Halkey xeerada qaxootiga fadhiyi lahayeen waxeey helayaan fursad ay ku soo baxaan oo ay bulshadda ku soo dhex galaan, ayey sheegtay.
Xisbiga Kristdemokraterna ayaa maanta shaacinaya barnaamij magangelyo, halku qofka sharciga sugaya heshiis lix bilood ah la galayo dawladda. Heshiiskan ayaa ka dhigan in qaxootigu ku khasbanyihiin laga bilaabo marka ay waddanka yimaadaan todobaad kasta qaataan 15 sacaadood oo ah waxbarashadda luuqada ee SFI loo yaqaano.
Hadii ay qaxootigu diidan shaqooyinka loo diro waxaa laga jarayaa lacagaha ay ka helaan Laanta socdaalka. Balse hindisaha sharci ee xisbiga KD ayaan weli sheegin inta lacag ee laga jari doono qofka diida shaqada.
“Qof kasta oo Iswiidhan yimaada waa in u bulshadda soo dhex galaa oo shaqeeysto. Dadka waddanka ku nool wey shaqeeystaan, maaha in qaxootiga laga sooco oo laga takooro bulshadda,” ayey sheegtay hogaamiyaha xisbiga KD.
Si kastaba ha ahaatee, xisbiga KD ayaa ah mid ay aad hoos ugu dhacday taageeradiisa oo laha yaabo in uusan soo galin baarlamaanka Sweden doorashada soo socota.
Siyaasi reer Yurub ah oo dadkiisa kula taliyey in ay wajiga modoobaystaan
Ygeman: Soomaalida diidmo ayaa la siinayaa, wadankooda ayaa lagu celinayaa
kkkkkkkkkkkkkkkkkkk maa mooda waadan shaqo taalo waxay dadka u diirayan waa prattik iyo shaaqo aan wax lacaga laga heelayn dadkii wadanka ku noola 10sano aya wiili ku jiira prattik biilasha oo aan wax qarasha kasogalin saa waa dad biila sharciiya waxaa waacan in dadka jooga sweden aay xiita hadii aay shaqo parattiga u diirayan aay xiita siiyan wax haba yaratee niiyada u dhiisayo ciirtana aay kaga maarman laakin maanta dhan ama sanado baadan ayad ku jiiraysa parattig iyo niiyo jaab waa laga quurux badan yahay
way dhacdaa says:
July 7, 2016 at 15:06
kolay ani aragtidayda ma xuma in dadka lala shaqaysto caafimaad ahaana qofka binu aadamka ah shaqada ayaa jirkiisa iyo maskaxdiisa u fican markaas waxyaabo badan oo somalida iyo ajaanibtaba ay faaido ka helin kolay shaqadu waa ay u dhaantaa waxaana laga raysan lahaa lokalada iyo gidaaar taagnida waxyaabo badana qofku uu ka faaiidaya hadii ay noqoto qibrad shaqo iyo hadii ay noqoto luqada kolay qof dadka lasoo shaqeeyay iyo mid aanba shaqayn isku mid maahan waa ay kala waayo aragsanyihiin goaankaas aadban usoo dhawynayaa waliba dhalinyarada in qasab lagaga dhigo
July 8, 2016 at 08:16
War Horta Waa su’aalee siyaasiyiinya Sweden miyaanay camal kale lahayn oon qaxootiga ahayn???!!!
Halka wadamada kale ay ka hadlaan dhaqaale, amni, hormar,caafimaad, siyaasad arimo dibad, Sweden shaqadeedu Waa qaxooti uun kkk
Bal wax kale iskadaa xiitaa kama hadlaan dhibaatada guryo la’aanta kajirta wadanka iyo magaaloyinka 10 sano la sugo guryaha.